Shacabka magaalada Garoowe oo soo dhaweeyay qabashada wajiga 2-aad ee shirka wadatashiga ee ka furmi doona Garowe. – Radio Daljir
Shacabka magaalada Garoowe oo soo dhaweeyay qabashada wajiga 2-aad ee shirka wadatashiga ee ka furmi doona Garowe.
Garoowe,Dec,20 -Dadweynaha magaalada Garowe ee caasumada dawladda Puntland ayaa waxaa ay soo dhaweeyeen qabashada shirka wadatashiga ah ee maalinta berito qaybtiisa labaad uu ka furmi doono magaalada Garoowe.
Qaar kamid ah howl wadeenada idaacada Radio Daljir ee magaalada Garowe oo la kulmay dadweynaha magalada Garoowe ayaa dadweynuhu waxaa ay sheegeen in ay soo dhaweeneeyaan,raalinaya ka yihiin shirka wadatashigaa ee umada Soomaliyeed mar ay fikirkooda cabirayeen.
Dadweynaha ayaa waxa ay sheegeen inay guul tahay in dawladda Puntland ay shirka qabato ayna sheegeen inay aad ugu heelan yihiin inay doorka uga aadan ka qaataan habsami u socodka shirka Garowe.
Waxaa ay tilmaameen in natijada shirka ay rajaynayaan inay noqoto mid umadda Soomaliyeed xal iyo israac u horseedi karta iyo horkac dhanka siyaasada ah.
Magaalada Garoowe ayaa waxaa laga dareemayay maalmihii ugu dambeeyey dadaal loogu jiro soo dhaweynta ergooyinka ka qeyb galaya shirka,ayadoo ilaa hada ay magaalada Garoowe kusoo qul qulayaan ergooyinkii shirka ka qeyb galayay.